Shikhar Post » प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनमा पर्यटन व्यवसायीहरु पनि !
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनमा पर्यटन व्यवसायीहरु पनि !
पर्यटन क्षेत्रको बृद्धिविकासमा टेवा पुग्ने विश्वास
काठमाडौं, २६ असोज । आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पर्यटन क्षेत्रको उपस्थिति बलियो देखिएको समाचार शिखरपोष्टले तयार पारेको छ । उम्मेद्धार छनोट गर्ने क्रममा दलहरुले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ स्थापित पर्यटन व्यवसायीहरुको नाम सिफारिस गर्ने क्रम जारी छ । यो समाचार तयार पार्दासम्मको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लाक्पा शेर्पा (संखुवासभा), पूर्व अध्यक्ष रमेश धमला (धादिङ), पूर्व महासचिव राजेन्द्र बजगाई (गोरखा), सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा (सोलुखुम्बु), मदन कुमार आचार्यलगायतको नाम सिफारिस भएको छ ।
त्यसैगरी अहिलेसम्म प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा टानका कोषाध्यक्ष लिलाबल्दब दाहाल (काका), नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा, टानका पूर्व कोषाध्यक्ष अञ्जन थापा (कुमार), नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघका कार्यबहाक अध्यक्ष आरबी अधिकारी (कुमार), नेपाल पर्वतारोहण संघका सचिव टिकाराम गुरुङ, बलराम न्यौपाने, शिव अधिकारी, शिव लामिछानेलगायतको नाम सिफारिस भएको छ । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको पर्यटन व्यवसायीहरुको उपस्थितिले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस व्यवसायीहरु यस्ता छन्:
टासी लाक्पा शेर्पा, संखुवासभा
चर्चित आरोही तथा पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका यूवा नेता टासी लाक्पा शेर्पा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष उम्मेद्धारका रुपमा सर्वसम्मत सिफारिसमा परेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समिति संखुवासभाले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको संखुवासभामा प्रतिनिधि सभाका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवारको रुपमा शेर्पाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
टानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका शेर्पाले उम्मेदवार सिफारिस भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टीलाई धन्यवाद दिँदै अबको फैसला संखुवासभावासीको हातमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संखुवासभाको विकास निर्माणमा निकै सक्रिय शेर्पा जिल्लालाई ऊर्जा र पर्यटनको हव बनाउने योजनाका साथ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अघि बढेका छन् । शेर्पाले पटक पटक सगरमाथासहित विश्वका विभिन्न हिमालको सफल आरोहणसमेत गरिसकेका छन् ।
टानका पूर्व अध्यक्ष रमेश धमला कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्धारका लागि सिफारिस भएका छन् । कांगे्रस धादिङका सभापतिसमेत रहेका धमलाको नाम धादिङ क्षेत्र न २ बाट प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस भएको हो । उनले आफुले टिकट पाएको खण्डमा भरखरै बनेको बाम गठबन्धनलाई समेत पराजित गर्दै बिजय हासिल दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
राजेन्द्र बजगाई, गोरखा
टानका पूर्व महासचिव राजेन्द्र बजगाई नेपाली कांगे्रसबाट गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस भएका हुन् । उनीसँगै पार्टीले चिनकाजी श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिस गरेको छ । नाम सिफारिससँगै केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच बनाइसकेका श्रेष्ठ र स्थानीय तहमा लोकप्रिय बजगाईमध्ये कसले टिकट पाउने भन्ने चासो सबैमा छ । उम्मेद्धार छनोटमा ध्यान नदिएकै कारण यसअघि त्यस क्षेत्रको स्थानीय तहमा पार्टीले हार बेहोर्नुपरेको भन्दै त्यसलाई ध्यानमा राखेर उम्मेद्धार छनोट गर्नुपर्ने बजगाईको भनाइ छ ।
सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सोलुखुम्बु
सोलुखुम्बु नाम्चेका व्यवसायी सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस भएका छन् । एमाले सोलुखुम्बुले उनलाई सर्वसम्मत रुपमा समानुपातिक उम्मेद्धार सिफारिस गरेको हो । उनीसँग सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको १५ वर्ष अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएर काम गरेको अनुभव छ ।
नेकपा एमालले पर्यटन व्यवसायी मदन कुमार आचार्यको नाम प्रतिनिधि सभा समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस सिफारिस गरेको छ । नेपाल राष्टिय पर्यटन ब्यबसायी सङठनका उपाध्यक्ष, राजाधानी पेशागत विशेष जिल्ला कमिटिका सदस्य तथा आर्थिक विभाग प्रमुख आचार्यको नाम पार्टीले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो ।
लिला बल्लभ दाहाल (काका), ओखलढुंगा
टानका कोषाध्यक्षसमेत रहेका यूवा पर्यटन व्यवसायी लिलाबल्दब दाहाल (काका) ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष उम्मेद्धारको लागि सिफारिस मा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दाहालको नाम सिफारिस भएको हो । दाहालसहित पार्टीले तेजेन्द्र खनाल, हंसराज वाग्ले, डिल्लीराज खनाल, डेकराज भट्टाराईको नाम सिफारिस गरेको छ । लिलाबल्लभ दाहालको स्थानीय स्तरमा राम्रो प्रभाव भएकाले उनलाई बलियो उम्मेरदारको रुपमा हेरिएको छ । भूकम्पले भत्काएका जिल्लाको दुई दर्जन बढी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुका साथै युवा लक्षित फुटबल तथा भलिबल प्रतियोगीता सञ्चालन गरेर युवाहरुको मन जितेका छन् । आफुले टिकट पाए यीनै आधारमा जित्ने उनको दाबी छ ।
आरबी अधिकारी (कुमार), दोलखा
नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघका कार्यवहाक अध्यक्ष आरबी अधिकारी (कुमार)लाई नेपाली कांगे्रस दोलखाले क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस गरेको छ । नेपाल तरुण दल दोलखाका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी पर्यटन व्यवसायको अलावा लामो समयदेखि काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । व्यवसायीकताले मात्र युवाहरुको विकास हुने र युवाहरुमा आर्थिक विकास भएपछि दोलखाको विकास हुन्छ भन्ने धारणाका साथ अघि बढिरहेका अधिकारीले जिल्लाको धेरै स्थानमा सामाजिक कार्य गर्दै आएका छन् । दोलखाली युवाहरु माझ लोकप्रिय रहेका अधिकारीको गाउँमा हाल सम्म काँग्रेसले हार्नु परेको छैन ।
राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा, धादिङ
नेकपा एमालेले धादिङले नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य तथा युवा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस गरेको छ । पार्टीले सापकोटालाई धादिङ क्षेत्र नम्बर २ (क) को प्रदेश सभा उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।
अञ्जन थापा (कुमार)
नेपाल उधोग तथा ब्यबसायी महासघको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल राष्टिय पर्यटन ब्यबसायी संगठनका सचिब पर्यटन क्षेत्रका चर्चित तथा उदयमान यूवा पर्यटन व्यवसायी अञ्जन थापा (कुमार) प्रदेश नं ३ बाट सर्वसम्मत समानुपातिक तर्फ प्रदेश सभामा सिफारिस भएका छन् । मिलनसार व्यक्तित्वका धनी कुमार नेपाल उधोग व्यवसायी महासंघको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस भएका हुन् ।
शिव अधिकारी, नुवाकोट
रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजका महासचिवसमेत रहेका गन्तव्य नेपाल गु्रपका अध्यक्ष शिव अधिकारीको नाम नेपाली कांगे्रसले नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस गरेको छ । अधिकारी देशैभरीका पर्यटन पत्रकारहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज)का केन्द्रीय अध्यक्षसमेत हुन् ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका सचिव टिकाराम गुरुङ पनि एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा समानुपातिक उम्मेद्धारको रुपमा सिफारिस भएका छन् । पार्टीले संखुवासभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट गुरुङको नाम प्रदेश सभा समानुपातिक उम्मेद्धारमा सिफारिस गरेको हो । सगरमाथालगायत विभिन्न हिमाल आरोहण गरिसकेका गुरुङ सामाजिक सेवामासमेत समर्पित छन् ।
बलराम न्यौपाने, रसुवा
रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपाने नेपाली कांगे्रसको तर्फबाट रसुवा प्रदेश नम्बर १ को समानुपातिक उम्मेद्धारको लागि सिफारिस भएका छन् ।
ध्रुब अधिकारी, धादिङ
युवा पर्यटन ब्यबसायी ध्रुव अधिकारी नेकपा एमाले धादिङ क्षेत्र न २ को (ख)प्रदेश सभा समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा सर्बसम्मत रूपमा सिफारिस भएका छन् ।
शिव लामि छाने, रसुवा
गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ–नेपाल)का पूर्व अध्यक्ष शिव लामिछाने रसुवा जिल्लाबाट समानुपातिक तर्फ उमेद्वार सिफारिस भएका छन् । उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट सिफारिसमा परेका हुन् ।